MMA Shorts - Yini Big Deal !? - China Shenzhen ngokwezifiso Ezemidlalo Gqoka
MMA Shorts - Yini Big Deal !?
Yiziphi MMA Shorts?
Ukuze iso ongaqeqeshiwe, izikhindi ukuthi uzobona isilinganiso MMA (okuxubile karate ukuba ongelutho) yakho fighter egqoke ejimini noma ku-TV lungase lungafani okuthile okukhethekile kodwa kungaba yiphutha ukucabanga ngakho ukucabanga ngakho! Ngemva kokufunda lesi sihloko emfushane wena uzohamba kokuba umxhwele izinga le mininingwane eliphuma ku pair of MMA izikhindi ukuthi ngeke rue ekungazini kwenu ... kahle mhlawumbe hhayi kodwa, uma umusha mdlalo futhi bafuna ukwazi yini okumelwe siyibheke uma ucabanga imali pair sikhathi ufunde.
MMA Shorts ahloselwe ngokukhethekile ukumelana contact azinabo egcwele MMA kodwa ngesikhathi esifanayo siduduze esiphezulu bese uvumele ukunyakaza kokuvinjwa. Ngizwa nithi: 'Zikwenza kanjani lokhu ?! Umsindo awfully kuyinkimbinkimbi !!
Ukuphendula okungenhla, zikhona izindlela eziningi ukuthi MMA izikhindi afeze injongo yabo, izinhlobo eziningi akhona futhi (nakuba ezinye izinhlobo kungenzeka uthanda Hype it up ukumaketha ijagoni) kungcono akunzima ngaleyo ndlela. Ngokuvamile ezibizayo kunamanye ngazimbili kwezemidlalo izikhindi njengalabo esetshenziselwa lezinyawo noma basket ball, kukhona kancane ukuthi uya ku ekwenziweni MMA Shorts ukuthi I hle Uzame uchaze ngezansi.
Hlobo luni izici kungaba Ngilindele ukuthola ku pair of MMA Shorts ke?
Hlola umlenze ngaphakathi kwanoma iyiphi uhlobo MMA esifingqiwe kanye uku cishe ukuthola lokho kubizwa panel elula. Amajaji elula, babevame kusuka impahla spandex uhlobo, yakhiwe ku izikhindi ukubavumela ukuhambisa ngokukhululekile ngaphezulu nge fighters ukunyakaza ngaphandle ezidwengula noma ukudabuka. Futhi, ngenxa yokuthi iphaneli elula ayakhukhumala lapho ingcindezi uphoqelekile ngokumelene nalo, Ngakho-ke ukhululekile okungaphezu nje kokuba okunye okubalulekile engaguquki ezinzima esikhundleni sayo.
Nalapha futhi, esinye isici esivamile MMA Shorts ahlukaniselwe ezivuzayo emaceleni izikhindi. ezivuzayo Split ncamashi lokho bathi futhi ubukhulu yokuhlukanisa umphetho ohlangothini izikhindi kuyahlukahluka ngobukhulu kuncike brand, kodwa zonke asetshenziswa ngenjongo efanayo. I umphetho yokuhlukanisa ivumela induduzo eyengeziwe futhi usize ukunyakaza kokuvinjwa, ikakhulukazi MMA abathanda esikhulu ethangeni ezihlukahlukene! I kokuvinjwa ukunyakaza isici kubalulekile lapho kubambana futhi ukukhahlela, ngoba njengoba sazi sonke MMA imayelana oxhumana nabo njengoba egcwele njengoba umdlalo uthola, futhi fighters bathambekele kudingeka kube unkulunkulu kuhle Day nezimo kakhulu! Nokho akuwona wonke izikhindi ibe isici elula iphaneli, kukhona inala lemikhiqizo laphaya ukuthi nje abe umlenze ebanzi asetshenziswa ngenjongo efanayo, izinqumo ezindabeni zomuntu siqu kanye nezincomo ngokuvamile nje phansi preference oyisebenzisayo.
Dual Velcro yasibamba
Njengoba kanye kokuba drawstring okujwayelekile (ezinye izinhlobo ngisho ahlukahlukene kuleli, kodwa lokhu kungaba lonke isihloko entsha uwedwa ke sika!), I-MMA izikhindi ngokuvamile ihlanganisa strip Velcro yasibamba ngaphambili izikhindi kanye nendawo yonkana phambi waistband. Lolu hlobo ombaxambili Velcro ebiyelwe uhlelo yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi isikhindi belondekile ngangokunokwenzeka once, kanye bewafihla drawstring, okuyinto nakavele likwazi ukuhlukaniseka kalula wadonsa futhi Uzithukululile, okuyinto, banikezwe contact imvelo egcwele MMA, ayengakwenza umphumela ukubanjwa, ibhulukwe lakho phansi ngomqondo ongokoqobo!
Ilula futhi Quick Omiswe Material
MMA izikhindi zivame kwenziwa kusukela engasindi (ngokuvamile polyester esiyinhlanganisela impahla) izinto, ukuthi kukhona omiswe esheshayo futhi intambo yefilakisi kude umswakama ngokushesha. Nalapha kulokho MMA fighters ukugqoka kancane kakhulu futhi zidinga ukuba njengoba beshesha ngangokunokwenzeka, ungafuni izikhindi wena ugqoke ukuze kube nzima futhi uthole indlela yakho. Wena ubuye ungafuni i pair ngokweqile umswakama of izikhindi, unikezwa empeleni kwenzeka ukuze athinte igazi, umjuluko amanzi (mhlawumbe izinyembezi kakhulu uma ungenalo okuhle kakhulu!). Sicela uqaphele Nokho ukuthi ngoba nje MMA izikhindi zenzelwe dudula uketshezi, kukhona omiswe okusheshayo nokwehlisa ukukhula kwamagciwane, kusadingeka ukuzigeza, ngaphandle yebo ungumuntu ukuhlela ukunqoba impi yenu elandelayo nge ezinye uhlobo 'ziyanuka kuhanjiswa aphume 'amasu!
Hhayi into uzothola ku zonke izinhlobo MMA izikhindi, kodwa ezikhathini eziningi ekupheleni ephakeme wemakethe kuyoba waistband rubberised kwangaphakathi. Yakhelwe ngenhloso yokunikeza isango extra okhalweni ukunciphisa shift bese ukunyakaza izikhindi nalapho igqoke futhi lisetshenziswa. I waistband engaphakathi eziningi MMA izikhindi kuthiwa ujenga nge iraba like impahla, isici baqashwe ngenjongo yokunikeza isango esingeziwe izikhindi laqina okhalweni lwenu. Lokhu isango extra kusiza ukuphungula shift bese ukunyakaza izikhindi uma lisetshenziswa. Njengoba kunjalo kubo bonke oxhumana naye mdlalo osheshayo behla benyuka imizuzwana yokuhlukanisa ukubala futhi ungakhetha ungathathi iso lakho off ibhola ukugcina ngokulungisa izikhindi yakho bahlale ezihambayo!
Ngazama ukuqhubeka iyimfushane, kodwa kukhona kungaba okuningi ukuze ungeze kodwa sizobe londoloza ukuthi ngesinye isikhathi. Ngithemba ukuthi manje ungakwazi ayaphuma behla benyuka emhlabeni omusha MMA izikhindi ehlome elengeziwe (ewusizo) ulwazi kunawe kwadingeka emizuzwini embalwa edlule!
MMA Shorts - Yini Big Deal !? Isiqophi Ezihlobene:
Our personnel are generally in the spirit of "continuous improvement and excellence", and together with the outstanding top quality merchandise, favorable price tag and fantastic after-sales solutions, we try to gain every single customer's rely on for Running Phezulu , hockey izingubo , ejimini shirts , Today, We are with great passion and sincerity to further fulfill our global customers' needs with good quality and design innovation. We fully welcome customers from all over the world to establish stable and mutually beneficial business relationships, to have a bright future together.